Javier Henandez Oo Real Madrid Goalka Guusha U Keenay, Iyo Arda Turan Oo Kaadhka Cas Loo taagay Real Madrid Oo Iska Xaadirisay Afar Dhamaadka Champions Leaque-ga
Javier Henandez Oo Real Madrid Goalka Guusha U Keenay, Iyo Arda Turan Oo Kaadhka Cas Loo taagay Real Madrid Oo Iska Xaadirisay Afar Dhamaadka Champions Leaque-ga 0 April 23, 2015 in Wararka by Staff SLL Media Visits: 591
Somaliland Live Media Sports
Somaliland Live Media Sports Kooxda Real Madrid ayaa guul cidhiidhi ah garoonkeeda kaga gaadhay kooxda Atletico Madrid, waxayna Los Blancos guushan ku gaadhay gool uu dhamaadkii ciyaarta usaxiixay Javier Hernandez. Guushan ayaa Real Madrid ka caawisay inay u soo baxdo afar dhamaadka Champions Leaque, waxayna ku biirtay kooxdah Barcelona, Bayern Munich iyo Juventus.Kadib sideed kulan oo ay xili ciyaareedkan iska horyimaadeen Real Madrid iyo Atletico Madrid ayay ugu danbayn Real Madrid guusheedii ugu horaysay ka gaadhay kooxda Simeone.
Indhaha oo dhan ayaa ku soo jeeday Santiago Bernabeu iyada oo ay kooxaha ree Madrid ku kulmeen kulanka lugta labaad ee Champions Leaque-ga. Real Madrid ayaa kulanka lugta labaad ee Champions Leaque-ga wareegiisa sideed dhamaadka Bernabeu ku soo dhawaysay kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Atletico Madrid. Jamaahiirta Real Madrid ayaa xili horeba dibada garoonka soo buux dhaafiyay iyaga oo baska kooxoodooda banaanka u dhaweeyay.
Markii ay Kulankii lugta hore ee Calderon ayaa ku soo dhamaaday barbaro gool la’aan ah, waxayna kooxaha Real iyo Atletico udagaalamayeen sidii ay ugu soo bixi lahaayeen wareega afar dhamaadka horyaalka kooxaha Yurub ee Champions Leaque.
Ugu danbayn Real Madrid ayaa daqiiqadii 88 aad ee dhamaadkii ciyaarta heshay goolka qalbi jabiyay kooxda martida ahayd ee Atletico Madrid, waxaana goolka ay raadinayeen ciyaarta oo dhan udhaliyay javier Hernandez , wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Los Blancos waqti xili danbe hogaanka ciyaarta ugu qabatay.